Ukuthengisa ukuXhobisa | Martech Zone
Kutheni i-PreSales ikulungele ukuba nguMnini wamava oMthengi: Ujongo lwangaphakathi kwiVivun
NgoLwesine, uJuni 30, 2022 NgoLwesine, uJuni 30, 2022 Matt Darrow
Khawufane ucinge ukuba bekungekho Salesforce yamaqela eNtengiso, iAtlassian yabaphuhlisi, okanye iMarketo yabantu abathengisayo. Eyona nto yayiyiyo imeko yamaqela e-PreSales kwiminyaka embalwa edlulileyo: eli qela libaluleke ngokungaqhelekanga, elicwangcisiweyo labantu alinaso isisombululo esenzelwe bona. Endaweni yoko, kwafuneka badibanise umsebenzi wabo kunye usebenzisa izisombululo zesiko kunye nespredishithi. Ukanti eli qela labantu lingagcinwanga ngomnye wabona bantu babalulekileyo nabanobuchule kwi-B2B
Izifundo ezi-5 eziFundiweyo ngaphezulu kwezigidi ezingama-30 kuNxibelelwano lomThengi omnye ukuya komnye ngo-2021
NgoLwesibini, Juni 21, 2022 NgoLwesibini, Juni 21, 2022 Max Koziolek
Kwi-2015, umququzeleli wam kunye nam sazimisela ukutshintsha indlela abathengisi abakha ngayo ubudlelwane nabathengi babo. Ngoba? Ubudlelwane phakathi kwabathengi kunye nemidiya yedijithali yayitshintshile ngokusisiseko, kodwa ukuthengisa akuzange kuvele ngayo. Ndabona ukuba kukho ingxaki enkulu yomqondiso-kwingxolo, kwaye ngaphandle kokuba ii-brand zixhomekeke kwi-hyper-relevant, zingenako ukufumana isignali yazo yokuthengisa yomelele ngokwaneleyo ukuba iviwe phezu kwe-static. Kwakhona ndabona ukuba intlalo emnyama iyanda, apho
Ikhampasi: IZixhobo zokuThengisa zokuThengisa iNtlawulo yeNqakrazo nganye yeeNkonzo zokuThengisa
NgoLwesine, uJuni 16, 2022 NgoLwesine, uJuni 16, 2022 Daniel Alvarado
Kwihlabathi lokuthengisa idijithali, izixhobo zokuthengisa ziyimfuneko kwii-arhente ukubonelela abasebenzi ngezixhobo ezifunekayo ukukhupha iimveliso zabathengi ngokufanelekileyo. Ngokungathandabuzekiyo, ezi ntlobo zeenkonzo zifunwa kakhulu. Xa ziyilwe kwaye zisetyenziswa ngokufanelekileyo, zinokubonelela ngee-arhente zentengiso yedijithali ngezixhobo eziyimfuneko zokuhambisa umgangatho ophezulu, umxholo ofanelekileyo kwabo baza kuba ngabathengi. Izixhobo zokuthengisa zibalulekile ekuncedeni ii-arhente zilawule kwaye zilungelelanise umjikelo wokuthengisa. Ngaphandle kwabo, kulula ukuba
Isiphelo: Ukuvala iiNtengiselwano ezininzi ngeNdlela eDityanisiweyo yeNtengiso eSekwe kwiakhawunti ye-Account (ABM)
Eyona nto isebenzayo, ihlakaniphile, kwaye isicwangciso esisebenzayo sokuthengisa i-akhawunti-based marketing (ABM). Ikhuthazwa kukujoliswa kwedatha kunye nezicwangciso zokuthengisa zamajelo amaninzi, i-ABM inceda abathengisi bandise ukuguqulwa kunye nokukhulisa ingeniso. IQonga le-Teminus le-ABM Yintoni eyenza i-Terminus yahluke kwamanye amaqonga e-ABM yindlela iqonga elibandakanya ngayo ii-akhawunti ekujoliswe kuzo, okwenza abathengisi benze umbhobho ongakumbi. I-Terminus ngenene ibonelela ngendlela ebanzi kwi-ABM kuba uthethwano lwemveli, lwamajelo amaninzi luqhuba iziphumo ezingakumbi. I-Terminus inceda ukusombulula imiceli mngeni emikhulu yabathengisi